Sawirro: Ciidamada Danab oo saldhig cusub ka sameystay magaalada Jowhar | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sawirro: Ciidamada Danab oo saldhig cusub ka sameystay magaalada Jowhar
Sawirro: Ciidamada Danab oo saldhig cusub ka sameystay magaalada Jowhar
Iyadoo inta badan gobolada dalka ay howlgallo lagu sifeeynayo maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ka wadaan ciidanka Kumaandooska Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayay saldhig cusub ka sameeysteen magaalada Jowhar ee Gobolka Shabeelada Dhexe, isla markaana ah caasimadda dowlad Goboleedka Hirshabeelle.
Taliyaha guutada 16-aad Kumaandooska Xoogga Dalka Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo lahadlay Idaacadda Ciidamadda Qalabka Sida ayaa sheegay saldhigan ciidanka Danab ay ka sameeysteen magaalada Jowhar ay ugu talagaleen in lagu dardar galiyo howlgallada looga xoreynayo argagixisada Gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan.
“Ciidanka Kumaandooska waxay xarumo ku leeyihiin Juballand, Koonfurgalbeed, Galmudug, haddana Hirshabeele ayay ka sameeysteen dhowaan waxaan dalka oo dhan ay ka xoreeyn doonaan argagixisada Al-Shabaab ee dhibaatada ku heysa shacabka Soomaaliyeed”. Ayuu yiri Taliye Ismaaciil.
Taliyaha ayaa xusay in ciidanka Danab ay howlgallo ka fuliyeen inta u dhexeysa Jowhar iyo Muqdisho, halkaasi oo ay dhibaato ku qabaan shacabka iyo gaadiidka labada dhinac isaga kala gooshta, waxaana uu intaa ku daray inay ciidanka ay cagta mariyeen jidgooyooyin lagu dhibaateynayay shacabka, wadanuna ay ka saaraan miinooyin dhulka lagu aasay.
Guud ahaan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolada dalka ka ayaa waxa ay wadaan howlgallo lagu cirib tirayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ee caadeeystay daadinta dhiigga Ummadda Soomaaliyeed, kuwaasi oo haatan ciidanka ay kasaareen degaanno badan, lana qorsheynayo in laga sifeeyo goobaha fara ku turiska ah ee ay ku dhuumaaleysanayaan.
Maqaal horeMaxay ka wada-hadleen Fahad Yaasiin iyo Xasan Sheekh?
Maqaal XigaMaxaa ka soo kordhay magacaabida Ra’iisul wasaaraha cusub?